खानेकुरा निल्नमा समस्या: कसरी बल्झिन्छ, कसरी गर्ने नियन्त्रण ? | सुदुरपश्चिम खबर
खानेकुरा निल्नमा समस्या: कसरी बल्झिन्छ, कसरी गर्ने नियन्त्रण ?
कहिलेकाहीँ हामीलाई खाना खाने बेलामा मात्रै नभएर पानी पिउने बेलामा समेत निल्न समस्या भएको महसुस हुन्छ । हामी औषधि खाँदैनौं तर पनि केही समयमा त्यो आफैँ निको हुन्छ । तर यही समस्यालाई लिएर कतिपयले भने यो दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको संकेत त होइन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
खानेकुरा निल्नको लागि समस्या हुनु एक यस्तो स्थिति हो जसमा भोजन वा तरल पदार्थलाई सहज तरिकाले निल्ने नलीमा कुनै न कुनै अवरोध हुन सक्छ । यसले खाना खाँदा होस् या पानी पिउँदा समेत घाँटीबाट निल्न कठिन भएको महसुस गराउँछ ।
कुनै कुरा निल्न कठिन हुने अवस्थालाई मेडिकल भाषामा डिस्फेजिया भनिन्छ । यो लक्षण सधैंको लागि वा दीर्घकालीन मेडिकल स्थितिको संकेत गर्ने समस्या होइन । यो केही समयसम्म रहन्छ र आफैँ ठीक पनि हुन्छ । त्यसैले यस्तो समस्यामा डराउनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
कुनै वस्तु निल्न समस्या हुनुका केही कारणहरु हुन्छन् । प्रायः इसोफेगसमा हुने क्षति या इसोफेगसलाई कन्ट्रोल गर्ने मांसपेसी वा तन्त्रिकाले ठीक काम नगर्दा यस्तो समस्या सिर्जना हुन्छ । जुन बारम्बार दोहोरिरहने समस्याभित्र पर्छ ।
खानेकुरा निल्न हुने समस्यालाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै मुख वा गलामा हुने समस्यालाई ओरोफेरिन्जियल डिस्फेजिया भनिन्छ । भोजनलाई मुखदेखि पेटसम्म लैजाने एउटा नली हुन्छ । उक्त नलीमा हुने समस्यालाई इसोफेगस भन्छन् । यही दुई अवस्थामा कुनैपनि कुरा निल्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
निल्न समस्या हुनुका लक्षणहरु
डिस्फेजियाको स्थिति बारम्बार देखिन सक्छ र समयसँगै यो निको पनि हुन्छ । कुनै पनि खानेकुरा निल्न समस्या हुने वा सलोइङमा निम्न लक्षणहरु देखिन्छ ।
– कुनैपनि खानेकुरा निल्ने बेलामा गला अवरुद्ध हुनु, खोकी लाग्नु आदि हुने गर्छ ।
– निलिसकेको खानेकुरा पनि फेरि मुख वा नाकमार्फत् बाहिर आउनु
– भोजन या पानीको समेत केही भाग आफ्नो गलामा वा छातीमा अड्किएर बसेको जस्तो महसुस हुनु
– वजन कम हुनु किनकि तपाईं पर्याप्त मात्रामा भोजन वा तरल पदार्थको सेवन गर्न सकिरहनु भएको छैन ।
– कुनै पनि खानेकुरा निल्ने बेलामा दुखाइको महसुस हुनु
– छातिमा दुखाइ वा दबाब महसुस हुनु ।
– बोली अवरुद्ध हुनु
– बच्चाहरुमा निश्चित प्रकारका खानेकुरा खान इन्कार गर्नु
– खाना खाने समय भोजन बाहिर निस्कनु
किन हुन्छ यो समस्या ?
तन्त्रिकामा क्षति हुँदा उक्त नसामा समस्या देखिन सक्छ । जसले कुनै पनि कुरा खाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गर्छ । डिस्पेजियाको केही न्यूरोलोजिकल कारणहरु समेत हुन्छन् । ती निम्नानुसार छन् ।
– यस्तो न्यूरोलोजिकल स्थिति जसले समयका साथसाथ मस्तिष्क र तन्त्रिकालाई समेत क्षतिग्रस्त गर्न सक्छ । यसमा पार्किन्सन रोग, मल्टिपल स्क्लेरोसिस र डिमेन्सिया आदि सामेल हुन्छन् ।
– मस्तिष्कमा हुने ट्युमर
कसरी बच्ने यो समस्याबाट ?
डिस्फेजियाको रोकथाम केवल त्यतिबेला सम्भव हुन्छ । जतिबेला त्यस्तो रोकावटलाई खोल्न सकिन्छ । कैयौं दीर्घकालिक न्यूरोमस्कुलर स्थितिहरु समेत यो समस्या देखिन सक्छ । यस्तो भयो भने यसलाई रोकथाम गर्न सम्भव छैन । यो बिस्तारै आफैँ ठीक हुने गर्छ ।
यसबाहेक औषधिको मद्धतले ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिजको कम या त्यसको रोकथामको काम समेत गर्न सकिन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !! आज बुधबार चम्किदैछ यी ८ राशिको भाग्य, तपाईको कुन ?
बैतडी जिल्लामा शव वाहनको व्यवस्था